Himalaya Dainik » नेपाली बजारमा आउँदैछ नयाँ विद्युतीय गाडी ‘निशान लिफ’
अहिलेकाे समय धेरेै मानिसहरु साधन बिना हिड्डुल गरेकाे देखिदैन् । प्राय मान्छे सम्म अहिलेकाे समय साधन त हुन्छ नै यसैगरी साधनमा पनि धेरै किसिमका प्रकारहरु देखिएकाले महंगाे महंगाे हुने गर्छन् । निशान मोटर्सको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्पले निशानको सर्वाधिक प्रतीक्षित “निशान लिफ” नेपालमा लन्च गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बिद्युतीय सवारीमा बिध्यमान करलाई वृद्धि गरिए पश्चात सो गाडिको लन्च कार्यक्रम पुर्व निर्धारित समयामा हुन सकेको थिएन। तर नेपाल सरकारले बिद्युतीय सवारीको करलाई पुर्नअवलोकन गर्ने व्यवस्था गरेकाले निशानको ‘लिफ’ गाडि २०२१ साल अप्रिलमा लन्च गर्ने भएको हो ।
निशान लिफ संसारकै पहिलो ‘मास मार्केटेड’ बिद्युतीय गाडि हो । यो गाडि बिद्युतीय गाडी मार्केटमा ग्लोबल लिडर पनि बन्न पुगिसकेको छ। निशान लिफ निसानको बिद्युतीय गाडीहरुमा सबै भन्दा उन्नत कार हो । निशान लिफ आम सर्वसाधारणहरुको सहज पहुचमा पुग्ने पहिलो बिद्युतीय सवारी बन्न पुगेको छ ।
४० मिनेटमा ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुने यस गाडीमा अत्याधुनिक इ–पेडल टेक्नोलोजी पनि समावेश
पहिलो निशान लिफ २०१० को डिसेम्बरमा जापानमा लन्च भएको थियो । उन्नत फिचरहरु र उत्कृष्ट लुक्स भएको निशान लिफ विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने सवारीको रुपमा परिचित छ। अधिक हर्शपावार र टर्क सहित आउने सो गाडीमा उन्नत टेक्नोलोजी र फिचरहरु छन। ४० मिनेटमा ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुने यस गाडीमा अत्याधुनिक इ–पेडल टेक्नोलोजी पनि समावेश गरिएको छ। इ–पेडलमा एक्सलेरेटर पेडल छोड्ना साथ गाडीको गति आफै कम हुदैं जाने हुनाले एउटै पेडलले ड्राइभिङ गर्न सकिनेछ ।
मजदुरी गरेर हुर्काएको छोरो तस्करले मारेपछि उजाडियो आमाको सपना
डल्ले खुर्सानीका छन् यस्ता ६ फाइदा
आज सुन कतीमा काराेबार हुदैँछ ?
आजको राशिफल : यी ४ राशिका लागि अशुभ !
हेमाले धर्मेन्द्रसंग विबाह गरेकै कारण आज ४१ बर्षसम्म भोगिरहेको एउटा सजाय
पोखराको न्युरोडबाट चोरीको सामानसहित दुई जना पक्राउ
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङमा कोरोना पुष्टि
नेपाल चिनाउने कलकत्ते चेली (भिडियोसहित)
रेवान पोखराको अध्यक्षमा लक्ष्मण बराल
आज थप २ हजार ९४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भयाे कारोबार ?
इ-मेल : [email protected]mail.com